सिरानीमुनी के राख्ने ? वास्तुशास्त्र भन्छ – यी कुरा राखेर सुत्दा हुन्छ फलिफाप ! « Lokpath
राति सुतेको समयमा सिरानीमुनि गीता हुनु राम्रो हुन्छ ।
राति सुत्ने समयमा सिरानीमुनि मुला राखेर सुत्ने र भोलिपल्ट बिहान उठेपछि उक्त मुला शिवलिंगलाई चढाउनाले राहुको दोष निवारण हुन्छ ।
कतिपयले हनुमान चालिसा राख्न पनि सुझाएको पाइन्छ ।
लसुनमा हुने भोल्टाइल तेलको गन्धले शरीरमा गर्मी पैदा गर्छ । यसले रुघा तथा सर्दीको समस्या हटाउँछ ।
फलामजन्य उपकरणः तपाईको सिरानीमा फलामजन्य उपकरण राख्नुहोस् ।
सिरानीमुनि फूल राख्दा पनि राम्रो हुन्छ ।
दक्षिण दिशामा शिर अनि उत्तर दिशामा गोडा पारेर सुत्नु सर्वोत्तम मानिन्छ । यदि यसरी सुत्नुभयो भने धेरै बिमारी लाग्न पाउँदैनन् ।
प्रकाशित मिति: २०७८,बैशाख,१,बुधबार २१:३१